यस्तो छ आत्ममुग्ध व्यक्तिहरु खुशी र सफल हुनुको रहस्य
नेपाल लाइभ बुधबार, कात्तिक २०, २०७६, १०:३०
काठमाडौं– हामीले कहिल्यै हाम्रा स–सना अभ्यासहरुले उत्पन्न गर्ने खुशी र आनन्दका विषयमा सोचेका छौं? छैनौं भने एकपटक समीक्षा गरौं। पछिल्लो एक अध्ययनले आफैंप्रति मुग्ध वा दंगदास रहने व्यक्तिहरु बढि खुशी र सफल हुने तथ्य सतहमा ल्याइदिएको छ।
जस्तोः कतिपय व्यक्तिले फेसबुकको आफ्नो तस्वीरमै ’लाइक’ या ‘रियाक्ट’ गरेको हुन्छ जसलाई हामी अस्वभाविक ठान्छौं। तर, उसको पोइन्ट अफ भ्यू’ मा यसको खुशीको मूल्य हामीले सोचेभन्दा सघन र महत्वपूर्ण हुने रहेछ।
कतिपय व्यक्तिहरु आफूलाई विशेष ठान्छन्। आफ्नो महत्व अरुकोभन्दा अलग र पृथक छ भन्ने सोच्छन्। सामाजिक सञ्जालमा होस् या कुनै सार्वजनिक समारोहमा नै किन नहोस्, पहिरन, भावभंगीमा र प्रस्तुतीका कारण आफूलाई अलग देखाउने व्यक्तिहरु देख्दा कतिपयले त्यस्ता उपक्रमलाई ‘नाटक’ को संज्ञा पनि दिन्छन्। यस्तो हर्कत हामीलाई अनौठो र अपाच्य लागे पनि यस्ता व्यक्तिहरुले सुखद जिन्दगी जिउने अध्ययनले देखाएको छ।
आत्ममुग्धको अर्थ मान्छेको मनोभावसँग जोडिएको हुन्छ। मनस्थितिसँग गाँसिएको हुन्छ। आफैंप्रति मुग्ध वा दंगदास रहने गुणलाई आत्ममुग्धता भनिन्छ। आत्ममुग्ध व्यक्तिहरुले आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिन्छन् र सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्न रुचाउँछन्।
यो विशेष र अतिरिक्त प्रकृतीको गुणले मान्छेलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर उत्तरी आयरल्यान्डको क्विन्स युनिभर्सिटीका मनोवैज्ञानिकहरुले अध्ययन गरेका रहेछन्। नार्सि्सिज्म (आत्ममुग्धता) बारे गरेको सो अनुसन्धानबाट के पत्तो लागेछ भने, आत्ममुग्ध व्यक्ति हत्तपत्त तनाव र डिप्रेशनको शिकार हुँदैनन्। यस्ता व्यक्तिहरुले आफ्नो खुशीको परिधि आफै तय गर्छन् र यसैभित्र रमाउँछन्।
आत्ममुग्ध व्यक्तिहरुको आफ्ना हर्कतले अरुलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ या अरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ भन्ने पक्षको खासै ख्याल गर्दैनन्। अध्ययनले भनेको छ, ‘आत्ममुग्धतालाई सामाजिक व्यवहारमा राम्रो र उपयुक्त मानिंदैन। तर, यसले व्यक्तिको निजी पक्षलाई भने बलियो र आत्मविश्वासी बनाउँछ।’
मनोवैज्ञानिकहरुकै शब्दमा ‘आत्ममुग्ध व्यक्तिहरु अहङ्कारी हुन्छन्। आफूलाई हरेक कुरामा अरुभन्दा राम्रो ठान्छन्। यस्ता व्यक्तिहरुमा बढी नै आत्मविश्वास हुन्छ। अरु व्यक्तिहरुका पीडा र मर्का अलिक कम बुझ्ने स्वभाव यिनीहरुमा हुन्छ।’
अनुसन्धानमा संलग्न डा. कोस्टासका विचारमा यी सबै नकारात्मक पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि आत्ममुग्ध व्यक्तित्वका मानिस कैयौं प्रकारका लाभमा रहन्छन्। यिनीहरु जीवनमा सफल पनि देखिएका छन्। एकोहोरो आफ्ना संघर्षहरुमा लागिरनाले पनि यस्ता व्यक्तिहरुलाई सफलता हात लाग्ने गरेको हो।
मान्छेको मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएको बल र ताकतसँग सरोकार राख्ने पक्ष भएकाले यो विषयमा अध्येताहरुलाई आत्ममुग्ध व्यक्तिहरुका कमसल पक्षहरुलाई न्युनिकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने आयाममा पनि अध्येताहरुले अनुसन्धान गरिरहेका छन्
बीबीसीमा प्रकाशित सामग्रीमा आधारित
तस्बिरः सेभेन थिम्स डटकम